Nin La Aasi Waayey Ilaa Uu Wiilkiisa Madaxweyne Noqday - Waadinews | Somali News and Entertainments | Waadinews | Somali News and Entertainments
Muddo laba sano ah oo dib loo dhigay, maydka aabaha madaxweynaha Congo ayaa ugu dambayntii lagu duugay meeshii uu ka soo jeeday. Etienne Tshisekedi oo ahaa mucaarad rugcadaa ah jirayna 84 sano ayaa ku geeriyooday Belgium bishii Febraayo 2017-kii. Balse maydkiisa ayaa lagu hakiyey Brussels iyada oo la sheegay inuu xumaa xidhiidhkii ka dhexeeyey madaxweynihii hore ee Congo Joseph Kabila. Balse taasi ayaa dhamaatay markii uu wiilkiisa , Felix, noqday madaxweynaha dalka sanadkii la soo dhaafay. Kummanaan qof ayaa isugu soo baxay aaskiisa. Qaar ka mid ah taageerayaasha ayaa buux dhaafiyey garoonka diyaaradaha xilligii maydkiisa laga soo dajiyey garoonka maalintii Qamiista ahayd.
Olole ka dhan ah sidii Tshisekedi maydkiisa lagu keeni lahaa magaalada uu ka soo jeeda ayaa lagala kulmay carqalado badan. Marka loo eego taageerayaashiisa, Tshisekedi waxa uu u matalaa guul, iyaga oo aaminsan inuu yahay halyeey qaran. Sarkaal ka tirsan dowladda ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in horay loo hakiyey diyaraaddii lagu keenayay maydka. Maalintii Qamiista ahayd, ayaa diyaaraddii lagu waday maydka ay ka soo dagtay garoonka diyaaradaha ee Kinshasa, iyada oo ay ku sugnaayeen wafdi uu hoggaaminayey madaxweyne Felix Tshisekedi. Maydkiisa ayaa loo qaaday xarun aaskiisa uu ka dhacayey oo aad loo qurxiyey halkaas oo ay yimaadeen kummaanaan qof oo taageersan. Tshisekedi ayaa muddo tobannaan sano ah ku jiray siyaasadda,,
balse iskuday badan oo uu sameeyey ayuu ku guul daraystay inuu noqdo madaxweyne. Waxa uu hore u noqday wasiirka arrimaha gudaha ka hor inta uuna mucaaradka ku biirin. Tshisekedi ayaa mucaarad ku noqday nidaamka cusub. Waxa uu hoggaamiyey dibad baxyo ka dhacay dalka kaddib doorashadii 2006-kii. Felix Tshisekedi ayaa ku guulaystay doorashada dalka ka dhacday sanadkii la soo dhaafay. Taasi oo la sheegay inay ahayd markii ugu horreysay oo si nabad ah uu hoggaanka ku dhiibo madaxweyne ka soo jeeda dalkaas tan iyo markii ay madax bannaanida ka heleen Belgium 1960-kii. BBC